Gbasara Anyị - XIAMEN GACHN TECHNOLOGY CO., LTD.
Nabata na GACHN
Teknụzụ Gachn (Koodu ngwaahịa: 832368)gbadoro anya na imepụta ngwa ọrụ nwere ọgụgụ isi ma na-agba mbọ ime ka nkwakọ ngwaahịa ngwungwu a na-arụ bụ ihe dị adị maka ndị ahịa anyị. Cachn emeela ọrụ dị oke mkpa na mkpesa nke igwe na igwe eji ede akwụkwọ ụlọ na akụrụngwa site n'inye egwuregwu na teknụzụ na-eduga ya na egwuregwu zuru oke.
Teknụzụ Gachn zara ajụjụ siri ike na "Mind na China 2025" atụmatụ mba, ebumnuche maka akụrụngwa akụrụngwa ụwa nwere ọgụgụ isi ma na-etinye ma mmasi na mbọ ike ịmegharị "ụlọ ọrụ a na-achịkwaghị achịkwa" ka ọ bụrụ ihe dị adị maka ndị ahịa anyị.
N'oge a, n'ime ụdị GACHN ®, anyị nwere igwe na-agụta ọnụ akpati na-agwakọta ya nke ọma na igwe nkwakọ ngwaahịa ngwungwu ngwungwu maka ngwaahịa dị ka akwa nhicha ahụ, akwa nhicha akwa na ihicha & ehicha mmiri na ihe ndị ọzọ. N'elu nke ahụ, anyị na-eme atụmatụ ịgbakwunye nkwakọ nri na ịchọ mma ịchọ mma na Pọtụfoliyo ngwaahịa anyị.
Teknụzụ Gachn Ntọala, abọrọla na 2011. Na Gachn, anyị na-arapara n'echiche azụmaahịa "ahịa ndị ahịa." Kwa afọ, ihe karịrị 10% nke ego ha na-enweta kwa afọ na-aga ego R & D. Na Gachn, anyị tinyere mkpụrụ obi anyị niile na uche anyị iji mepụta uru maka ndị ahịa. Site na dong otu a, ahia a na-amata ngwa ahia GACHN®. Na nloghachi, ụlọ ọrụ ahụ enwekwala oge uto dị ịtụnanya site na uto ego ha na-enweta kwa afọ karịa 50%. Ka ọ dị ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ nwere arụpụta arụmọrụ kwa afọ nke ihe karịrị 200 setịpụrụ. N'afọ ndị gafeworonụ, Gachn etolitela onwe ya n'ime igwe nkwakọ ngwaahịa na akụrụngwa kachasị amasị maka ụlọ ọrụ akwụkwọ ụlọ.
Iwu azụmahịa: Gbado anya ndị ahịa
Ozi: Ndinam ngwaahịa zuru oke na amamihe ma mepụta valus maka ndị ahịa.
Ọhụụ anyị: Iji bụrụ akara nke mbụ akara gburugburu ụwa.
:Kpụrụ: Ikpe Ziri Ezi, Rush, Zuru Oke, Win-win
Elepụghị anya ： asọmpi ziri ezi, chọọ eziokwu site na eziokwu
Rush: Iji bụrụ ihe atụ, ọ hụrụ n'anya iburu ibu ọrụ, tụghaa iwu
Zuru okè: ndozi na - aga n’ihu, mee ka izu oke zuo oke, akwụsịkwala ịga n’ihu
Imeri-mmeri: iji merie onye obia, mmeri merie ndị ọrụ, mmeri merie ndị na - ebunye ya.
Ngwa ahịa knockout na nkwakọ ngwaahịa Gachn Technology:
1,igwe na - agbanye akpaka na-agakọ na ngwakọta maka ị nweta akwa nhicha na ngwa panty
2 machine igwe eji eme ihe akpaka na ngwugwu ngwugwu umuaka
3, Udiri mmiri na –eme akwa ga - adi otu na otutu uzo, igwe na - agaghari
4 machine Igwe eji emeghari ahu nke nwere oghere iru ya na uzo abuo, igwe na-acha uhie uhie
5, Oke ọsọ, na-agakọ mpempe akwụkwọ eji emeputa akwa maka ụlọ mposi
6, Nrụpụta dị elu na eriri nkwakọ ngwaahịa maka nkpuchi ihu, akwa ihu ihu dị elu na-ejupụta na igwe na-etinye akara
Iji na-agbaso nzọụkwụ ahịa, anyị na-emeziwanye onwe anyị ma mee ka anyị zuo oke.
Anyi ji obi oma nabata ndi enyi anyi n’uwa niile bia kporo anyi ka anyi na aru oru igba-ogologo. Jiri ezi obi na-ele anya iwulite mmekọrịta ga-abụ mmeri n'ọdịnihu dị nso!